Imbali yeNkampani -Shenzhen Hwatime Biological Medical Electronics Co, Ltd.
Yandisa ukusetyenziswa kweemveliso zonyango lwezasekhaya
Ngexesha lobhubhane, uHwatime wakhawuleza waya kwinkxaso epheleleyo yeWuhan! Iminikelo kumbutho woMnqamlezo obomvu kwiphondo laseHubei, kwiRed Cross yoluntu kwiphondo laseGuizhou, kuluntu lwaseRed Cross kwiphondo laseXinjiang elizimeleyo nakwilizwe laseRed Cross kwiphondo laseYunnan, ifikelela kwizigidi ezibini ze-CHY. Yandisa ukusetyenziswa kwezamayeza i-X8 infrared thermometer, imitha ye-M1 yeoksijini yegazi kunye neemveliso zemaski zokhuselo zeKN95 nge-EU CE kunye ne-US FDA.
Iphuhlise inkqubo yeoksijini yokuqala yemodyuli
Iphuhlise inkqubo yokuqala yemodyuli yokuhluza ioksijini. Inkqubo yokuvelisa ioksijini ye-PSA yeemolekyuli yaphuhliswa ngempumelelo. Unyango lwaseHwatime lolokuqala ukufumana isatifikethi esipheleleyo seAAA kule fayile.
Ukuveliswa kwemveliso kunye nokuqhambuka kwetekhnoloji
I uthotho lokujonga isigulana, i-XM yokujonga isigulana kunye ne-PSA umatshini weoksijini owenziwe nge-oksijini wasungulwa ngo-Okthobha u-29. abagadi bezonyango kumaphondo, iidolophu kunye neekhawunti. Ngokuphucula kunye nokugqibelela kwe-PSA yonke-in-nye umatshini weoksijini, uHwatime uye wamatsha waya kunyango olusisiseko lonyango ngendlela ejikelezayo. Ayikuniki nje kuphela amaziko onyango kunye nabantu ukuba basebenzise iimveliso zeHwatime, kodwa ikwenza uphawu lweHwatime lukazwelonke luthathe inyathelo elibalulekileyo eliya phambili.
Ukusekwa kwesityalo seoksijini seShenzhen
Inkqubo yokujonga esembindini yenziwe ukuba isebenze ngempumelelo, enokuthi idibanise abagadi beziguli abali-128 ngaxeshanye. Ixhasa ukwandiswa kwefestile yokubonisa yeempawu ezibalulekileyo zeebhedi eziphambili, ivenkile kwaye iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isetyenziswe khona. Uphucule kakhulu umgangatho wenkqubo yemveliso yeoksijini yeHwatime PSA kunye nezixhobo zayo ezixhasayo.
Isiseko sophuhliso lwamazwe aphesheya iMelika Hwatime Technology CO., Ltd. eAlhambra, California, USA.
I-Hwatime yathatha inyathelo lokudibanisa izibonelelo zobuchwephesha zamanye amazwe kwaye yenza ipatheni efanelekileyo yokuqhagamshela phakathi kweShenzhen Hwatime, Hong Kong Hwatime kunye neMelika Hwatime. Iimveliso zithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-90 nakwimimandla, kwaye phantse iiyunithi zonyango ezingama-10,000 zisebenzisa iimveliso zeHwatime yonke imihla.
Yasekwa Jiangxi Hwatime Medical Technology Co., Ltd.
Ukungena ngokusesikweni kwicandelo le-PSA umatshini we-oksijini womatshini, ophucule ubume besisombululo ngokubanzi sobunjineli kwezonyango. Ukubonelelwa kwezisombululo ze-PSA yokusefa umatshini weoksijini kunye nenkqubo yokubonelela ngeoksijini kuwo onke amanqanaba eeyunithi zonyango.
Ndithathe iprojekthi yeKhomishini yoPhuhliso kunye noHlengahlengiso lweSizwe yokuphuhlisa isikhuthazi sentliziyo esethutyana, esivale umsantsa kweli candelo lentengiso yasekhaya. I-pacemaker yentliziyo yethutyana inamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda ezizimeleyo ngokupheleleyo kwaye yafumana ilungelo elilodwa lomenzi wechiza. Uphumelele ngempumelelo T wokubeka iliso kwimveku, ufumene isatifikethi sobhaliso lwezixhobo zonyango kunye nokuqinisekiswa kwe-EU CE. Ukufunyanwa kweTekhnoloji yoLondolozo lwangaphambi kokukhathalela., Ltd., Iqhubile yaphucula itekhnoloji yokubeka iliso kunye nokunyusa amandla apheleleyo.
Yasekwa i-Shenzhen Hwatime yoBunjineli boNyango yezixhobo zeZonyango Co., Ltd.
I-Shenzhen Hwatime Medical Engineering Equipment Co., Ltd igxile ekucocweni kwegumbi lokusebenza, ukucocwa kwe-ICU / CCU, ukucocwa kweziko, ikhemesti ezenzekelayo, njl. Isatifikethi se-EU CE kunye neqela laseJamani le-TUV 13485. Ubunjineli bezoNyango i-Hwatime ngomnye wabanikezeli abakhokelayo kumthengisi wezobunjineli kwisicwangciso sesisombululo siphela esinamava atyebileyo eqela lolawulo kuyilo loyilo lobunzulu, uhlahlo-lwabiwo mali lweendleko, ulwakhiwo emva kwexesha, ukwamkelwa kokugqitywa kunye nokubhida kwiiprojekthi zokuqala.
Yasekwa i-Shenzhen Hwatime Biological Medical Electronics Co, Ltd.
Nge-23 kaMeyi ka-2012, iShenzhen Hwatime Biological Medical Electronics Co, Ltd yasekwa eBaofu Jewellry Industry Park, eShenzhen, China. Kuphuhlisiwe kwaye kwaveliswa H-uthotho lweeparameter zokubek 'esweni, ifumene iphepha-mvume lemveliso yezixhobo zonyango kunye nobhaliso lwe-H-series monitor.